Loquat ရဲ့ ကျန်းမာရေး အာနိသင် ................ - Hello Sayarwon
Loquat ရဲ့ ကျန်းမာရေး အာနိသင်
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 01/10/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Loquat ဒီနာမည်က ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ မရင်းနှီးတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကာတွန်းကားတွေ ဘေဘီလေးတွေ ဆော့တဲ့ ဂိမ်းတွေထဲမှာတော့ ဒီအသီး နာမည်လေးကို ကြားဖူးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတွေ့ရပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပေးတဲ့ Loquatဆိုတဲ့ အသီးလေးရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးလေးအကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Loquats အသီးနဲ့ အရွက်တွေက ကျန်းမာရေးကို အတော်လေး အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကို ကျန်းမာစေသလို ဆီးချိုကို ထိန်းညှိပေးပြီး အရိုးတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကိုလည်း ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကိုလည်း အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝ အသီးအနှံတစ်မျိုးပါ။
ဒီအပင်က တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက မျိုးရင်း အပင်တစ်မျိုးပါ။ အမြဲသိမ်းပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး အပင်ပုတစ်မျိုးပါ။ အစိမ်းရောင်ရင့်ရင့် အရွက်ခပ်ရှည်ရှည်မှာ လိမ္မော်ရောင် အသီးလေးတွေ သီးတာပါ။ တရုတ်ဇီးသီး၊ ဂျပန်ဇီးသီးလို့လည်း သိကြပါတယ်။
အသီးပုံစံက ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းလေး ဖြစ်နိုင်သလို ဘဲဥပုံလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဝါရောင် ဒါမှမဟုတ် လိမ္မော်ရောင် အခွံရှိပြီး အတွင်းသားက သရက်သီးလိုမျိုး အနှစ်များတဲ့ အသားအမျိုးအစားပါ။ အလယ်မှာတော့ အညိုရောင် အစေ့တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ အရသာကတော့ သရက်သီးနဲ့ မက်မွန်သီး ရောစပ်ထားတဲ့ အရသာမျိုးပါ။ မှည့်ရင် ချိုပြီး အစိမ်းဆိုရင်တော့ ချဉ်ပါတယ်။
Loquat မှာ ပါတဲ့ အာဟာရ
Loquat မှာ အခုလို အာဟာရဓာတ်လေးတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
omega6fatty acidsတို့ ပါဝင်နေပါတယ်။
Loquat ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး
စားတဲ့အခါ ချိုချိုချဉ်ချဉ်နဲ့ အရသာရှိတဲ့ Loquat က ကျန်းမာရေးကို အခုလို အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ကျန်းမာစေတယ်
ဒီအသီးရော အရွက်ကပါ ချောင်းဆိုးသက်သာစေပြီး ချွဲပျော်စေသလို လေပြွန်ရောင်တာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဖလေဗာနွိုက် ဒြပ်ပေါင်း ပါဝင်နေမှုကြောင့် ချောင်းဆိုးတာကို သိသိသာသာ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Loquatမှာ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေမှုက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံရေးတပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ သွေးဖြူဥဆဲလ်တွေ ထွက်ရှိအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ နာတာရှည် ဖျားနာမှုတွေ မဖြစ်စေဖို့ အတွက်လည်း ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါသေးတယ်။ အရေပြား တစ်ရှူးတွေ အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်လည်း ကော်လာဂျင် ထွက်ရှိအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ အအေးမိဖျားနာတာတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကျစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် အရွက်ကပါ။ loquatအရွက်နဲ့ အစေ့တွေက အင်ဆူလင် ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဆီးချိုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အရိုးတွေရဲ့ သိပ်သည်းဆက ကျလာသလို အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်လည်း သွေးမဆုံးခင်မှာ အရိုး သိပ်သည်းဆက ကျလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အရိုးသိပ်သည်းဆတွေ ကျလာတာကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် သတ္တုဓာတ်တွေကို ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်တင်းဖို့ လိုမှာပါ။ ဒီလို အရိုးတွေ သန်မာစေဖို့အတွက် လိုအပ်မယ့် သတ္တုဓာတ်တွေကို loquat က ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှာပါ။
loquatမှာ pectin လို့ ခေါ်တဲ့ နေ့စဉ် လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် အူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေသလို ဝမ်းမှန်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။ အူမကြီးကို ကျန်းမာစေသလို အဆာခံနိုင်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
loquatအရွက်ကို အခြောက်ခံပြီး ရေနွေးကြမ်းအဖြစ် သောက်တာက သွေးထဲက အကျိုးမပြု ကိုလက်စထရောတွေကို ကျဆင်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ ethanol ပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးထဲက အကျိုးမပြု ကိုလက်စထရောတွေကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
loquatမှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် အာရုံကြောတွေကို ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် မေ့တာတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကဲ……. ချစ်စရာကောင်းသလို အရသာလေးဆန်းတဲ့ loquat လို့ အမည်ရတဲ့ အသီးလေးက အခုလို ကျန်းမာရေးကို ထောက်ကူပေးပါတယ်။
Loquat: Benefits, Side Effects, & How To Eat https://www.organicfacts.net/health-benefits/fruit/loquat.html Accessed Date 23 September 2021
Biological Activities of Extracts from Loquat (Eriobotrya japonica Lindl.): A Review https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5187783/ Accessed Date 23 September 2021